Shukulaatada Madow Iyo Kafeega Oo Kordhiya Farxada Qofka - Daryeel Magazine
Shukulaatada Madow Iyo Kafeega Oo Kordhiya Farxada Qofka
Sida uu qoray wargeyska lagu magcaabo Time, khubarada caafimaadka ayaa sheegay in cuntada oo si fiican loo qaataa ay keento inay naftu noqoto mid raaliya, sidoo kalena ay la dagaalanto murugada iyo waxyaalaha nafta diiqada geliya.
Sidoo kalena sida lagu daabacay wargeyska lagu magcaabo Gamma,khubaro ku takhasusay dawooyinka ,arrimaha caafimaadkana aad uga faalooda oo dhowaan sameeyey daraasad ayaa sheegay in kafeegu yahay mid haddii subixii salaada hore la cabo keena farxad, isaga oo markasta qofka kusii siyaadinaaya farxadaasi.
Waxay khubaradani sheegeen in haddii dumarku ay cabaan maalintii ilaa saddex koob oo coffee ah in ay ka badbaadayaan 15% caajiska iyo xanuunada laga qaado ama uu keeno caajiska iyo walalku.
Khubaradan ayaa sidoo kalena sheegay in cunitaanka Khudradu ay keento deganaan, iyada oo haddii toddobaadka la cuno khudradaasi ay ka dhigto qofka mid moraalkiisu sareeyo naftiisuna degan tahay, sidoo kale khubaradan ayaa sheegay in Shukulaatada madow oo la cunaana ay keento qofka oo farxad dareema, madaama oo laga sameeyey waxyaalaha kafeega laga sameeyo ama midhaha Coffee-ga.
Toddobaadkii oo la qaato 30 gram oo Dark Chocolate ahi ,waxay keentaa inuu yaraado Caajisku, iyada oo laga yaabo siday khubaradaasi sheegeen inuu xanuuno badan qofka ka kexeeyo.
Cuntooyinka kale ee farxada qofka kordhiya waxaa ka mid ah rumaanka oo hoos u dhiga cadaadiska dhiiga, walwalka iyo murugada. Canaaha garoorka ah ee loo yaqaan yogurt-ka iyo noocyada kala duwan ee lowska ayaa iyaguna dejiya niyada.
Cunista Shukulaatada Madow Waxay Kaa Difaaci Kartaa Macaanka Iyo Cudurrada Wadnaha Cabbista Kafeega Iyo Caafimaadka